Qaar kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne oo laga yaabo in ay tanaasulaan iyo Sababta oo la ogaaday - iftineducation.com
Qaar kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne oo laga yaabo in ay tanaasulaan iyo Sababta oo la ogaaday
aadan21 / February 7, 2017
iftineducation.com – Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ee lagu wado in ay dhacdo 8-da bisha Febraayo ayaa waxaa isku soo sharaxay 23-Musharax, Musharaxiinta qaarkood ayaana samaeyn badan ku dhax laheyn Xildhibaanada labada Aqal ee wax dooranaya.
Sida aan Wararka ku heleyno Musharaxiinta Madaxweyne qaarkood ayaa qorsheenaya in ay tanaasulaan kahor inta aysan doorashada bilaaban, halka Musharaxiin kalana iyana ku tanaasuli doonaan hoolka marka ay bilaaban rabto Doorashada.
Musharaxiintan qorsheenaya in ay tanaasulaan ayaa u badan kuwa aan saameyn badan laheyn sidoo kale ka cabsi qaba in ay ku fashilmaan doorashada ayna waayaan xitaa hal cod Xildhibaanada wax dooranaya.
Qaar kale oo kamid ah Musharaxiintan ayaa iyana tanasaulkooda loo sababeenayaa in ay wadahadalo hoose la galeyn Musharaxiin saameyn leh loona sameeyay balan qaadyo maaliyadeed iyo mid siyaasadeed.
Musharaxiinta tartameysa ayaa kuwa saameynta leh aysan ka badneyn ilaa 5-Musharax, waxaana inta badan Musharaxiinta ay ku hari doonaan wareega hore ee Doorashada ,musharaxiinta qaarkood ayaana isku soo sharaxay kaliya in ay helana magac .
Maalinta arbaca ee ku beegan 8-da bisha ayaa lagu kala bixi doonaa doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana Madaxweyne dalka ka noqon doona musharaxii hela kaldoonida Xildhibaanada labada Aqal ee wax dooranaya.
Nuxurka Khudbadihii ay jeediyeen Cumar C/rashiid, Farmaajo, Culusow iyo Jabarti
Duulimaadyada Garoonka Aadan Cadde oo Hakad la galiyay iyo Wasiir Gaadiidka oo ka hadlay